CNG ပြောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ။ | ဒီရေ
CNG ပြောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ။
CNG ပြောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ တွေ.နေရပါပြီ။
ခုပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ.မှာ ရန်ကုန်တစ်မြို.လုံး မနက်စောစောက စပြီး မီးဖျက်ထားပါတယ်။ (အကြောင်းကတော့ လောပိတလိုင်းတွေ ဘာဖြစ်နေလို. ပြင်ဖို. ရှိတယ်ဆိုလား)။ ဒါပေမဲ့ မီးပျက်တဲ့ အချိန်ကြာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် CNG ပြောင်းထားတဲ့ကားတွေ အကုန်ဒုက္ခ ရောက်ကုန်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာ နေ.တစ်ဝက်လောက်ထိ တန်းစီရပါတယ်။ နောက်နေ. တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ပေမဲ့ လိုင်းကား စီးရေ နည်းသွားလို.၊ စီးတဲ့သူတွေလဲ ကားကျပ်တဲ့ဒုက္ဓကို ခံရပါတယ်။ လုပ်ချင်တာပဲသိပြီး ရေရှည်အတွက် ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ပြင်ဆင်ထားပုံ မရပါဖူး။
အဲ့နေ.ကပဲ ကားစောင့်နေရင်းနဲ. စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခု ကြားရပါတယ်။ သာကေတက ၀ပ်ရှော.တစ်ခုမှာ (၆၂) လိုင်းက ကားတစ်စင်းမှာ ဖြစ်တာပါ။
ကားနောက်လိုက်က ကားပေါ်တက်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါ ဓါတ်ငွေ.ကပဲ စိမ်.နေတာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး တစ်ခါတည်း ၀ုန်း ဆို ကန်ထွက်ပြီး၊ မီးက အထဲမှာ လှိုက်လောင်ပါလေရော။ ဖြစ်ချုင်တော့ တံခါးကို ချက်ပါ ချထားတော့၊ ရုတ်တရက် ဖွင့်လို.လဲမရဘူး။ ဆေးရုံ ရောက်ရာက်ချုင်းပဲ ဆုံးသွားပါတယ်။ ကားအုံနာကတော့ တော်တော်လေးရှင်းလိုက်ရပါတယ်။ သေဆုံးသူရဲ. မိသားစုကိုလည်း နစ်နာကြေး တော်တော်လေးပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကားအုံနာလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ် ၀င်သွားတယ်။
ကားတွေကို CNG ပြောင်းတာပြောင်းခိုင်းထားတာ။ ကားတွေပေါ်မှာ ဂါတ်စ်အိုးတွေကို ဘယ်လို တပ်ထားတယ်၊ စံချိန်စံညွှန်းညီရဲ.လား၊ ဘာလားလဲ ညွန်ကြားထားပုံမရ၊ သေချာစစ်ဆေးပုံ မရပါဘူး။
ကြည်.လိုက်ရင် ကားတွေပေါ်မှာ ထားထားတဲ့ ပုံစံတွေက အသည်းယားစရာတွေချည်းပဲ။ အိုးတွေကို ကာတော့ ကာထားပါရဲ.။ နို.ဆီခွက်သာသာ သံပြားတွေ သုံးပြီးတော့လေ။ အချို. ကားတွေပေါ်မှာများ သံပြားတွေက စုတ်ပြတ်သတ်နေလို. ကိုယ်.ကိုယ် မထိမိအောင် ရှောင်ရှားနေရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ အထူးသဖြင့် (၁၀၅) ကားလိုင်းမှာပါ။ အဲဒီလိုင်းက ကားတွေက စုတ်တာများတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အိုးတွေကို တင်ထားတာလဲ ဖြစ်သလိုပဲ ဆိုပါတော့။ အင်း တစ်နေ.တစ်နေ့ စီးသာ စီးနေရတယ်၊ ကြာရင်တော့ မြန်မာပြည်ကသူတွေ နတ်ပြည် တို. နိမ္ဗာန်တို. ရောက်ရချည်သေးရဲ.။
(ရေးသားသူ - adaptor)။